८ सय नेपाली युवाहरुको सामुहिक चिहान भेटियो ! यस्तो छ रहस्य « Khasokhas Follow @khasokhasmag
८ सय नेपाली युवाहरुको सामुहिक चिहान भेटियो ! यस्तो छ रहस्य
इटली सरकारले विश्व युद्धमा वीरगती प्राप्त गर्ने वीर नेपालीको सामुहिक चिहान बनाएको भेटिएको छ । लोक गायक मिलन लामा इटलीको सान मारिनो राज्यमा रहेको चिहानमा पुगेका छन् ।
लामाका साथी शम्भुले त्यहाँ पुर्याएका थिए । लामाले चिहानमाथि उभिएर त्यहाँको वर्णन गरे । एकान्त ठाउँमा बनाइएको सामुहिक चिहानलाई फुल बगैंचाजस्तै बनाएको छ । प्रत्येक चिहानमा सिलालेखजस्तै स्तम्भ पनि राखिएको छ । त्यहाँ उनको नाम, उमेर र लडाइँ फौजको नामसहितका विवरण उल्लेख गरिएको लामाले भिडियो बनाएका छन् ।इटलीको रक्षाको लागि हिटलरको सेनासँग नेपाली लडेकोले सम्मान गरिएको हो । इटलीको रक्षाको लागि धेरै नेपालीले ज्यान गुमाएका थिए ।
तात्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले बहादुर शमशेरलगायतको नेतृत्त्वमा २ लाख ५० हजार नेपाली फौज पठाएका थिए । नेपालीहरू वीरताका साथ युद्ध मोर्चामा लडे । लडाइँको क्रममा नेपालीहरुले साइप्रस, ग्रिस, सिरिया, लेबनान, प्यालेस्टाइन, इराक, सिङ्गापुर, मलाया तथा बर्मामा लडेका थिए । दोस्रो विश्वयुद्धमा ७ हजार ५ सय ४४ नेपाली युवाहरूले ज्यान गुएको थिए भने २३ हजार ६ सय ५५ जना घाइते भए । युद्धमा सघाएको भन्दै बिलायत सरकारले ३ करोड ३३ लाख एकमुष्ट आर्थिक दान दिएको थियो । यसका अलवा धेरै नेपाली वीरहरूले बेलायतले पदक पनि दियो ।
विश्वयुद्धमा नेपाल सहभागी भएको थिएन । दुई लाख नेपाली युवाहरु युद्धमा पठाउन आवश्यक नै थिएन । तर, राणाहरुले ब्रिटिस शासकहरुलाई खुशी बनाउन ठूलो संख्यामा नेपाली युवालाई बेकारको युद्धमा पठाए । नेपालीको विदेशी स्वार्थको लागि बगेको रगतबाट राणाहरुले पैसा र धन्यवाद पाए ।स्टालिन नेतृत्वको सोभियत संघको लाल सेनाले हिटलरलाई पराजित गरेसँगै विश्वयुद्ध सकिएको थियो ।